OROMOO BARAARUUF WAYYAANEE GAGGABSUUN BARBAACHISAADHA – YEROOBLOG
Yerooblog	Oromia &Ethiopia, Oromo Protests, Politics	 April 4, 2016 7 Minutes
6) Barnoonni Bilisummaan Booda: Akkuma beekamu ji’oota sadan dabraniif barnoonni sirnaan Oromiyaa keessa hin turre. Mootummaan kun barsiiftota 60 ol ajjeessee, kuma lamaa ol mana hidhaa keessatti hiraarsaa jira. Barattoota dabtaraa fi qalama qofaa of harkaa qabanitti dhukaasa banuun hedduun fuuldura barattootaatti wayita galaafatu, hedduun dhiigni isaanii dhangala’eeti jira. Barattoonni 20,000 ol mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiru. Manneen barnootaa Oromiyaa buufata waraanaa waan ta’aniif tasgabbiin barachuun hin danda’amne. Kanaafuu haala kana keessatti baranneet wayitti baanaan hin yaadamu. Fakkeenyaaf warreen qormaata biyyaalessaa qorataman bifuma kamiinuu barattoota naannolee biroo bifa tasgabbaa’een waggaa guutuu barataa turan waliin dorgomanii gara barnoota ol’aanaatti ce’u jedhanii yaaduun gonkumaa hin danda’amu. Barattoonni Oromoo barana qormaata biyyaalessaa tasa fudhachuun irra hin jiraatu. Kanaaf barnoonni Oromiyaa keessa bilisummaan booda ta’uu qaba mariin jedhu baldhinaan godhamaa turuun ni yaadatama. Kanarratti amma namuu waliif galee jira.
Garuu tooftaa kana barattoonni mana barnootaa irraa hafuun osoo hin taane manneen barnootaatti argamuun kan amma duraa caalaa daran dirree qabsoo bilisummaa Oromoo gochuutu nu baasa. Kanarraa ka’uun Wiixata dhufu irraa eegalee barattoonni hundi manneen barnootaa banaa jiranii fi kan cufaman dabalatee yunifooormii isaanii sirnaan uffatanii dhaquutu irra jiraata. Barsiisonnis hojii idilee isaanitti deebi’u. Garuu adeemsa baruu fi barsiisuu osoo hin taane tooftaalee diddaa garaagaraatiin guyyaan dabra. Bakka qeerroo fi qonnaan bulaan hiriira qopheessanitti gurmuun itti dabalamuun, bakka haalli akkasii hin mijoofnetti taa’umsaan, seenaa barreessuun, waliif dubbisuun, warra miidhameef kadhannaa gochuun, faaruu qabsoo Oromoo farsuun kkf dabra.
Previous Post Martha Kuwee Kumsa: The Unsung heroine and Iron Lady!
Next Post Ayyaanni Hundeffamma Waggaa Lammaffaa OMN Magaala Barganitti Kabajame